Accueil > Gazetin'ny nosy > HCC: Mbola ilaina ve ity andrimpanjakana ity ?
HCC: Mbola ilaina ve ity andrimpanjakana ity ?
Fanontaniana mbola mipetraka amin’ny Malagasy rehetra ny momba ny fanesorana nataon’ny Filoham-pirenena tamin’iny fanesorana an’ingahy Honoré Rakotomanana iny tsy ho filohan’ny antenimierandoholona intsony. Ingahy senatera Paulbert dia nilaza tsy ampihambahambana fa fanonganampanjakana iny raharaha iny. Dia mbola nampiana ny fifidianana avy hatrany koa izany ka nametrahana an’ingahy Rivo Rakotovao ho filohan’ity Andrimpanjakana ity tao anatin’ny fotoana fohy dia fohy nialan’ingahy Honoré Rakotomanana. Tsy ampy ora iray akory dia vita indray ilay fanoloana. Miteraka resabe koa izany satria dia voalaza fa tsy nifanaraka amin’ny lalàna koa iny fifidianana iny. Aiza ny HCC (fahefana avo momba ny lalàmpanorenana) amin’ireny raharaha mahakasika ny andrimpanjakana ireny?
Tsy izay koa fa mbola miteraka resabe ihany koa ny raharaha Lylison de René izay nosazian’ny fitsarana higadra iray taona noho ny fanehoan-kevitra nataony. Hatramin’izao dia mbola resabe ny mahakasika io raharaha io. Olona ao amin’ny andrimpanjakana ara-dalàna ingahy Lylison ary senatera ihany koa. Niteraka resabe amin’ny mpahay lalàna iny raharaha iny, nefa dia tokony hiteny amin’izany ny HCC ny andrimpanjakana no azon’izany?
Mbola fanontaniana apetraka amin’ny HCC koa ny mahakasika ny fanoloana an’i Ahmad izay lasa filohan’ny baolina kitra afrikanina, ka valo volana aty aoriana vao nisy ny fanoloana azy.
Ny zavatra lehibe indrindra ary nampisy izao olana eto amin’ny firenena izao dia ny fanapahan-kevitrin’ny HCC tamin’ilay fangataham-piatoana ny filohan’ny repoblika nataon’ny depiote tamin’ny volana jolay tamin’ny taona 2015 hoan’ingahy filohampirenena Hery Rajaonarimampianina. Fitsarana no voalazan’ny lalàna sy ny andraikitra tokony hataon’ny HCC nefa dia “ pacte de responsabilité” na fifanaraham-piarahamiasa indray no navoakan’ ity andrimpanjakana mpanaramaso ny fampiharana ny lalàmpanorenana ity hataon’ny andrimpanjakanan mpanao lalàna sy fahefana mpanatanteraka.
Noho izany dia mametraka fanontaniana ny olom-pirenena maro amin’ny asa ataon’ity HCC ity. Rehefa maninona izy no mampihavana toa ny nataony tamin’ny fanonganana ny filoham-pirenena tamin’ny taona 2015 iny satria dia fampihavanana sadasada nahatonga fahantrana eto amin’ny firenena ny vokatry ny zavatra navoakany ary heverin’ny maro fa tsy araka ny lalàna. Nahoana no tsy miteny izy amin’ny raharaha Honoré Rakotomanana sy Lylison de Réné? Ny zavatra toa itony no tokony hitenenany ny andraikiny na tsia ny zavatra mitranga toa izao, indrindra fa amin’ny fotoana izay manahirana ny firenena toa izao.Izany indrindra no mahatonga ny olona maro manontany hoe mbola ilaina ve ity HCC ity?
Maro ny ahiahin’ny olona mahakasika ny fomba fiasan’ny HCC ankehitriny, ary indrindra ao akatokin’ny fifidianana sy mandritry ny ho fifidianana izay hatao manomboka ny taona 2018 hoavy izao. Miady hevitra ny mpanao politika amin’ny zavatra tsy dia mazava loatra, ary manahy ny olona tsotra satria be no mampiahiahy.